Ixesha kunye nabahlobo 55
Okubizwa ngokuba kunuka, kukubona kwezinto ezithile zezinto. Ezi propati zisebenza emntwini ngeqhekeza lakhe lokutshisa, apho zifikelela khona kwithambo le-olonic. Nerve yazisa into efihlakeleyo, ekwinto ebonakalayo, kwizinto ezikhoyo emzimbeni womntu. Eli ziko sisixhobo esibonisa ubume bento leyo ngolwazi oluyifumanayo ngethamsanqa lokuntywila. Umbutho yinto esemagqabini, indalo yesimo sodidi lweziporho zasemhlabeni. Isiseko sokunukisa sidibene kunye kwaye yenye yezinto ezingena kumgaqo-siseko kunye nokwakheka kwento yomntu. Indawo enukayo yento yomhlaba, kwaye ngenxa yeso sizathu inokuqonda ubume bendalo yomhlaba, eboniswe zizinto ezibonakalayo. Ke impendulo kwimibuzo "Yintoni le ngcinga yokubetha kwaye isebenza njani?" Kukuba iyinto, umhlaba ophantsi komntu okwinyama yomzimba, onukisayo ojonga uhlobo lweempawu ezithile emzimbeni imizimba, ekuthiwa yivumba okanye ivumba.
Ezi mpawu zibonakala ngokubetha kuphela. Ukutshaya kuko konke oku. Ukutshaya kukutya kwayo, oku kuyondla kwaye kuyikuxhasa. Ibona iimpawu ezithile kunye neemeko zento yomhlaba engaphandle. Ukuncumba yinto engabonakaliyo, efihlakeleyo yomhlaba, ongena kumgaqo-siseko wezinto ezinukayo kwaye ke ngoko kuluntu.
Amasuntswana omzimba ento ebonakalayo ngevumba lawo angena kwimveliso yokuziva kunuka. Ayisiwo kuphela amasuntswana eyento ebonwa ngokwasemzimbeni kodwa ngamasuntswana omhlaba njengokuhamba kwento, ukubangela ivumba. Into yomhlaba ifana nomsinga, ihamba iye ngapha nangapha into. Ukuhamba kwayo kwenziwa yincinci, engabonakaliyo amasuntswana ebonakala ngathi ininzi icwecwe; kodwa ukuba umbono wangaphakathi wokubona unomdla ngokwaneleyo kwaye nengqondo iyakwazi ukuyihlalutya yokuhamba, oko kuhamba kuya kuthatyathwa njengokwenziwa ngamasuntswana.
Xa imeko yokomoya yomntu ngamnye enxibelelana nemozulu yento ehlabayo-loo moya wenziwe ngamasuntswana akhankanyiweyo-amasuntswana abonwa kwimeko yomphunga, xa benxibelelana nerve yencindi. Ukuncwina luphawu olucacileyo lomzimba wezinto eziqondwayo. Yonke into enomzimba inommandla wayo owahlukileyo wobume bomhlaba, apho amasuntswana anqunyanyiswayo kwaye ejikeleza. Kodwa zimbalwa izinto ezinokubethwa. Isizathu kukuba ukuqonda ngokubona kwemphunga akuqeqeshwanga kwaye akulunganga. Xa ingqondo yokuvumba iqeqeshiwe, kwimeko yemfama, izinto ezininzi zinokubethwa ngoku ezinokuthathwa njengokungenaphunga.
Kusekho imvakalelo yokuphunga, ukuqonda kwangaphakathi, okunokuqulunqwa kwaye abanye abantu sele bephuhlisiwe, apho ivumba lezinto ezingekho ngokomzimba linokubonwa. Iibhlorho zelinye ilizwe zinokuzazisa ngevumba, kodwa oku ayisivumba lomzimba.
Elona candelo lidlalayo ebomini kukuba uncede ngokuncwina kulondolozo lobomi. Ukuvumba kokutya kubangela ukuba iijusi zamanzi zihambe kwaye zibashukumise, njengoko kunjalo ngokubona kwetafile elungiselelwe kakuhle. Izilwanyana zibonwa ngokwazi ngevumba leendawo zazo zokufumana ukutya. Babona ubukho beentshaba kunye neengozi ngevumba.
Ngelixa umntu esondliwa ngoku kufakwa into efihlakeleyo inkqubo yakhe ayithathayo ekutyeni okukuko konke akutyayo, kuya kuthi kwixesha elizayo, xa umntu elawula ngcono umzimba wakhe wenyama, ukuba akwazi ukukhupha imvakalelo yokuphunga eyona nto anayo ngoku yokufumana ukugaya ngaphandle kwenguqu yokutya okwenziwa emzimbeni. Into yakhe yokunuka iya kuhlawuliswa ngokondla umzimba. Ezi mvo zimbini zokungcamla kunye nephunga ziya kuthi, nangona kunjalo, zitshintshwe kakhulu kwiimeko ezikuyo ngoku ngaphambi kokondliwa ngokutshiza kuphela kunokwenzeka. Ke amasuntswana omzimba angabonakaliyo aya kuthi efunxwe sisiseko sento iya kuba yindlela yokondla umzimba wenyama.
Ukucamngca lelo meko yengqondo apho ubume bomfanekiso wengqondo busebenza ngononophelo ukunika imeko yesihloko sokucinga esiliqendu lobunyangi nesingenisiweyo kwicandelo lobugcisa ekugxilwe kulo. Ezi zinto zintathu zengqondo zihambelana ngqo nokucinga. Ezi zixhobo zine zichaphazelekayo ngokungathanga ngqo. Ubuso obumnyama buyaphazamisa ingcinga, njengoko benzayo nawo wonke umsebenzi wengqondo, kwaye ke ifaksi yobumnyama kufuneka ikwimeko apho ilawulwa ngokwaneleyo ukuvumela umsebenzi wokucinga. I-faculty yexesha ibonelela ngezinto ezisetyenziswa kumsebenzi wokucinga. Isikhanyisi esikhanyayo sibonisa indlela umsebenzi wendlela yokucinga ofanele ukwenziwa. I-I-faculty ye-I-inika isazisi kunye nobuntu bomsebenzi wokucinga. Ukuqiqa yimeko yengqondo, kwaye ngokwayo ayisiyiyo yeengqondo. Umsebenzi wokucamngca uqhubeka engqondweni ngaphambi kokuba unxulumene nezimvo zengqondo nangaphambi kokuba iimvakalelo zibizwe ukuze zinike inkcazo kwihlabathi elibonakalayo kuloko lwenziwe okokuqala ngumbono. Le yimeko yokucinga. Nangona kunjalo, kukhunjulwa ukuba into ebizwa ngokuba yingcamango ayisiyongcinga kwaphela. Yintoni ebanzi nangaphandle kokuqonda intsingiselo yegama elibizwa ngokuba ngumfanekiso ngqondweni kukudlala ngengqondo kwiimvakalelo, okanye, kumgangatho ophakamileyo, ukusebenza kwengqondo xa inyanzelwa zizimvo ukuba zivelise okanye zinike izinto Nika ukonwaba kwiimvakalelo kwaye ubonelele ngovuyo okanye iingxaki ezintsha ezibonakaliswe zizimvo kwaye zikhokelele kwingqondo. Kwimeko yale meko, ebizwa ubuxoki yingcamango, onke la magunya asixhenxe engqondo aphazamiseka kusetyenziswa ikhono lokugxila; kodwa olu luvuselelo luyinto nje yolwaneliseko lolunye uhlangothi lwendalo ekugxilwe kuyo kwaye ayingomsebenzi wecustoms. Isandla esijolise phambili kuphela kwecandelo lengqondo elinxibelelana ngokuthe ngqo nengqondo yendoda ephakathi. Ezi zinto zintandathu zinxibelelanayo. Intshukumo yabo iqhutywa kwicandelo lobuchule.
Ukuqonda ngcono ukuba yeyiphi na ingcinga-oko kukuthi, ingcinga yokwenyani-, kufuneka ibonwe ukuba lolunjani umbono-oko kukuthi, uloyiko olubizwa ngokuba yinto yokucinga -. Umbono ongeyonyani asisi senzo sokwazi amandla eengqondo, kodwa sisenzo secandelo elinye, ikhosi egxile kuphela, evuswa ziimvakalelo kwaye xa iphazamise ibangele ukuphazamiseka kolunye amandla amathandathu okanye ezinye zazo.
Imilo, amaphupha emihla, inyanga, ayisiyongcinga. Ukuveliswa kweefom kunye nezinto zendalo aziyongozi. Ukukhuphela nawuphi na umsebenzi, nokuba kungenxa yendalo okanye eyomntu, awuyongcinga, nangona kunjalo ngobuchule unokwenziwa. Ukuqiqa yindalo. Wonke umsebenzi wokucinga uyindalo entsha. Ukuqiqa akuyikopi indalo. Indalo ayibonisi ngqondo yokwenza umsebenzi wokucinga. Ukuqiqa kunika indalo zonke iintlobo kunye nemibala kunye nesandi kunye neendidi ezahlukeneyo. Oku kulungiselelwe yindalo ngengqondo kwaye kungabi yindalo.
Ukuhlakulela ingcinga-oko kukuthi, imeko yengqondo apho umfanekiso wefakhalthi, ikhowudi yentsusa, kunye nembonakalo yokujolisa zihlanganisiwe kwaye zenza umsebenzi wazo ngokuvisisanayo, ngelixa i-faculty emnyama inomda okanye icinezelwe, kunye namanye amandla amathathu , i-faculty yexesha, ikhazi lokukhanya, kunye ne-I-faculty enegalelo kulo msebenzi-kuyimfuneko ukuqonda inkqubo apha ekhankanyiweyo, ekuyiyo kuphela inkqubo enika ukuqonda ekusebenzeni kwengqondo.
Inqanaba lesibini kukwazi ukukhawula umxholo wengcinga, kwaye inyathelo elilandelayo kukusebenzisa ubuchule bomfanekiso ngokuhambelana nentloko kunye nentloko yokujolisa. Umbuzo ubuzwa amanqaku amabini okucinga athe avela kwimagazini kaMeyi nangoJuni yeELWI, kwi1913. Ngokuphathelele kumandla engqondo, ulwazi lungafumaneka ngaphakathi inqaku, "IiAdepts, iiMasters neMasahatmas,"Eprintwe KWILIZWI kwiUTshazimpuzi, UCanzibe, Isilimela, EyeKhala, kwaye Agasti, i1910.